Maxay Calooshaadu u Kuusan Tahay? - Daryeel Magazine
Maxay Calooshaadu u Kuusan Tahay?
Nooca cunnada jirkeenna siisa tamar ay xubnaheennu ku dhaqdhaqaaqaan waxaa loo yaqaan
karboohaydareetis(carbohydrates). Cuntooyinka laga helo waxaa ka mid ah baastada, bariiska, rootiga, baradhada, galleyda iqk. Sokorta laga helo miraha waa nooc ka mid ah karboohaydareetiska. Jirkeennu marka uu burburiyo karboohaydareetiska wuxuu u sii beddelaa sokor fudud oo hadhow ku dhex milmi karta dhiigga, si markaas ay xubnaheennu u helaan tamar ay shaqo ku qaban karaan. Haddii aad cunto karboohaydareetis ka badan inta jirkaagu u baahan yahay, waxaa dhacaysa in jirku keydiyo oo uu u beddelo dufan si mar dambe loo adeegsado. Haddii cuntada aad cuneyso ay badan tahay, dhaqdhaqaaqa aad samaynaysana uu yar yahay, jirkaagu wuxuu billaabayaa in uu dheefta cuntada dufan ahaan u keydiyo waana sababta hadhow aad u cayilayso.
Maxay farta dhakhaatiirtu u Tahay mid Qoraakeeda aan La Fahmayn Waa Maxay Is-Hormarin Qofeed? Maxayse Tahay Muhiimadda Ay Leedahay? Maxay Tahay Sababta Nebi Maxamed U Doorbiday In Lagu Afuro Timir? Toddoba Arrimood oo ay tahay in aanad Samayn Markaad Cadhaysan tahay